Izinga lokutshintshwa kwemali kwihlabathi jikelele. Ukuguqulwa kwe-Intanethi kuyo nayiphi na imali
Isilinganiso sokubala -inkonzo ye-intanethi ekuvumela ukubala amaxabiso otshintshiselwano ngemali kwilizwe jikelele, i.e.e.eorrensis zangoku.
Rand izinga lokutshintshiselana lisetwa yonke imihla yiBhanki kaZwelonke yaseYurophu. Rand imilinganiselo enqamlezayo nayo isetwa yonke imihla yibhanki yelizwe ephambili. Inani lokubala lokutshintshiselana libonisa olu lwazi kwimithombo esemthethweni yasimahla.
Ungabona la maxabiso mabini Rand amaxabiso otshintshiselwano kuyo nayiphi na imali kwiwebhusayithi imaliratestoday.com kwinkonzo yethu Isilinganiso sokubala.
Ukuguqulwa kwemali okanye ukutshintshiselana ngemali enye kwelinye iqondo elifanelekileyo kwenziwa kwiibhanki zorhwebo. Ireyithi yokutshintshiselana ebhankini isetwe kwisiseko samaxabiso emali enqamlezileyo, ejongiwe mihla le kwikhawudi yokutshintsha kwemali.
Bona Rand amaxabiso otshintshiselwano yanamhlanje, kunye ne-euro, idola, i-yuan kunye nezinye iimali zehlabathi kwinkonzo yethu ye-intanethi. Isilinganiso sokubala kwaye uguqulele nayiphi na imali ngexabiso elifanelekileyo.
In Rand ikhowudi yokutshintshiselana, sithathela ingqalelo le migangatho ilandelayo njengeyona iphambili:
Amanani amaninzi otshintshiselwano Rand kwezinye iimali zibalwe ngesiseko samaxabiso. Umzekelo, iqondo lotshintshiselwano lwe Rand ukuya CFC franc ihlala ibalwa ngokusisiseko sereyithi yokutshintsha Rand ngokuchasene nedola yaseMelika kunye ne-Euro. Imithombo yolwazi yokubala ixabiso le Rand yanamhlanje amaxabiso asemthethweni asele ebhankini yesizwe nakwiBhanki yaseYurophu.
Ukongeza kumaphepha oncedo kunye Rand ngeranti online namhlanje UTshazimpuzi 16, 2021 ngolwaa Forex, kukho ezinye iinkonzo ezininzi zemali simahla kwisiza.
Iibhanki zibala amaxabiso okuguqula kuzo zonke iimali, kubandakanywa Rand, yanamhlanje yonke imihla ngokusekwe kubalo lokuthengiselana. Landa kwiwebhusayithi amaxabiso akhawulezileyo amaxabiso otshintshiselwano kunaniselwano. Umzekelo, inqanaba lonaniselwano Rand kutshintshiselwano nge-Forex kwi-intanethi.
imaliratestoday.com ngexesha lokwenyani elibekiweyo lonke inqanaba lwemali kwihlabathi.
Kwindlela yokubala yereyithi yokutshintshiselana, ulwazi ngamanani otshintshiselwano athathwe kwimithombo evaliweyo nesemthethweni.
inqanaba lomnqamlezo Rand ukuya kwixabiso lotshintshiselwano ngeDola ne-euro ukusuka kwiyona bhanki iphambili yelizwe namhlanje,
ibonisa inqanaba lomnqamlezo Rand ngokuchasene nedola kunye nee-euro kwiBhanki yaseYurophu,
kwangoko Rand ireyithi yokutshintshiselana kwi-intanethi kwi-intanethi kwi-intanethi.
Sebenzisa ikhowudi yokutshintshiselana kulula kakhulu.
Ukufumanisa umgangatho wexabiso lemali enye ngokuchasene nenye imali, faka amagama ezi ziqendu kwimimandla yokubala imali yethu kwaye ucofe iqhosha lokubala. Ungafaka amanqakwana abo kumgangatho wehlabathi. Ukujonga umyinge wohlengahlengiso, emva koko utshintshe indawo yezezimali ezinxulumene nomnye komnye, cofa ikhonkco elithi "utshintsho".
Ukuba ufuna iqondo lotshintshiselwano nge Rand kwidola yaseMelika, emva koko faka igama Rand kwicandelo lokuqala lesilinganiselo sokubala, kunye nakwindawo yesibini "idola yaseMelika". Ukuba ufuna inqanaba lomnqamlezo wedola yaseMelika ukuya Rand, emva koko ucofe u "tshintsho" kwaye ikhalityhuleyitha iyakubonisa umyinge ochaseneyo.
Kwikhaltyhuleyitha kukho indlela yesibini yokufumanisa Rand inqanaba lotshintshiselwano kuyo nayiphi na enye imali yehlabathi.
Kwiphepha leenkonzo, isixhobo sokubala ubungakanani benqanaba lewebhusayithi imaliratestoday.com kwibhlokhi Amazinga Exchange. Zonke uguqulo lwemali ehlabathini. Uluhlu lweemali ezifunyenweyo Rand kwaye ucofe kwikhonkco le Rand inqanaba lotshintshiselwano ukuya kwenye imali oyifunayo.
Kwindlela yokubala yereyithi yokutshintshiselana, ulwazi malunga namanani asemthethweni otshintshiselwano ahlaziywa kwakamsinya nje ukuba ubekwe ziibhanki ezisemthethweni.
Inhlanhla yokusebenzisa inkonzo yokubala izinga lokutshintsha.